ZVINHU ZVINOKOSHA ZVESE ZVESE ZVESE ZVESANGANO DZVAKAIPA?
Iyo Dhijitari Signage indasitiri iri kukura exponentially gore pagore. Pakazosvika gore ra2023 Musika weDigital Signage wakagadzirirwa kukura kusvika pamadhora mazana matatu nemakumi matatu nemashanu. Kubata Screen tekinoroji iri kukura nekukurumidza chikamu cheiyi kusundira iyo Digital Signage musika kunyange mberi. Netsika Infrared Kubata Screen tekinoroji yakashandiswa mune zvekutengesa zvinoshandiswa. Zvisinei, nyowani Inofungidzirwa yeCapacitive yekudyidzana tekinoroji inoshandiswa muma smartphones yakamboshandiswa sezvo mari yekugadzira inosanganisirwa yaderera. Munyika izere neTouch Screen smartphones nematafura vamwe vanofungidzira kuti Touch Screens inguva yemberi yeDhijitari Signage indasitiri. Mune ino blog ini ndichaongorora kuti izvi ndizvo here kana kuti kwete ..Iye reindasitiri yekutengesa inodarika kotara yekutengesa yeDigital Signage asi iyo indasitiri pachayo iri kuenda nenguva inotambudza. Kutenga kwepamhepo kwakavhiringidza kutengesa uye kukonzera dambudziko mumugwagwa mukuru. Nemakwikwi akadaro ekutengesa nharaunda zvitoro vanofanirwa kuchinja maitiro avo kuti vatengi vabve mudzimba dzavo uye muzvitoro. Bata Screens ndeimwe nzira yavanogona kuita izvi, Kubata Screens kunogona kushandiswa kubatsira vatengi kuwana / kuraira zvigadzirwa uye kuenzanisa zvinhu zvakadzama mukuwedzera semuenzaniso. Nekushandisa kuratidza kwakadai sePCAP Yedu Kubata Screen Kiosks ivo vari kuwedzerwa kwekuti vatengi vanoona sei mabhigi avo kuma smartphones nemakomputa. Rudzi urwu rwemuchina runogona kushandiswa kupa vatengi ruzivo rwemunhu uye kuzviita kuti vawirirane nezvigadzirwa zvavo nemhando yacho. Kuvandudza ndipo panotengwa vatengesi vanogona kuita mutsauko, neakasarudzika akadai sePCAP Yedu Inobata Screen Mirror vanogona kuumba zviitiko izvo vatengi vanogona kuwana nekuuya muchitoro.
Imwe indasitiri umo Dhijitari Signage iri kuvandudza chikamu chavo iri muChikurumidza Service Mahotera (QSR). Musika inotungamira QSR mhando dzakadai seMcDonalds, Burger King uye KFC vatanga kuburitsa kunze Madhijitari Mabhodhi uye yekuzvishandira inofambidzana Kubata Screens kudura kwavo kwezvitoro. Maresitoreti akaona zvakanakira sisitimu ino sevatengi vanowanzo kuraira chikafu chakawanda kana vasina nguva yekumanikidzwa; zvichikonzera mhindu yakawanda. Mazhinji evatengi zvakare anoda aya marudzi eTouch Screens nekuti kazhinji havafanirwe kumirira nguva refu kuti yavo iratidzwe uye vasinganzwe kudzvanywa kwekuraira nekukurumidza kunge pavanomira pakatarisana. Sezvo software yekuraira ichiwedzera kuwana ini ndinofungidzira kuti Kubata Screens kuchakurumidza kuve kwakajairika mumaketani ekukurumidza ekudya.
Panguva iyo chikamu chemusika cheTouch Screens mukati meDhijitari Signage indasitiri chiri kukura ipapo zvakati wandei zvinhu zvakazvibata izvozvi. Nyaya hombe iri nezvisikwa zvemukati. Kugadzira Kwemukati Screen hakusi nyore / nekukurumidza uye hakufanirwe kunge kuri. Kushandisa webhusaiti yako pane Kubata Screen hakusati kuchizounza mabhenefiti aunoda kunze kwekunge iwe wagadzira yakakodzera yezviratidziro zvekuratidzira yakagadzirirwa nechinangwa. Kugadzira izvi zvirimo kunogona kutora nguva uye kudhura. Yedu mutengo inoshanda Bata CMS zvisinei inobvumira vashandisi kuti vagadzire uye vatore zvemukati yeTouch Screens. Dhijitari Signage AI inofungidzirwa kuve imwezve maitiro makuru mukati meiyo indasitiri iyo inogona kudhonza kutarisa kure neTouch Screens, paine vimbiso yemasimba akasimba akatengeswa akananga kumamwe mapoka evatengi. Bata Scenens ivo pachavo vanga vachiunganidza zvakaipa vatori venhau nguva pfupi yapfuura, kubva vachipomerwa mhosva yekusaratidza hutsinye kuenda kune zvinoti autoimendi iri kutora mabasa zvisizvo.
Bata Screens ICHAVE chikamu chakakura chenguva yemberi yeDigital Signage indasitiri, iyo mibairo yakawanda yeiyi tekinoroji tekinoroji inozotsigira indasitiri yacho zvizere Sezvo kugadzirwa kwemukati weTouch Screens kunovandudza uye kuwedzera mukana kune maSME kukura kweTouch Screens ichakwanisa kuenderera mberi kwayo kunoshamisa. Ini handizvitendi kuti Kubata Screens naiwo ndeaya ramangwana, vachishanda pamwe vasinga pindirani Dhijitari Signage kunyangwe ivo vanokwanisa kurumbidza mumwe neumwe kune zvese zigna mhinduro.